သစ္စာအလင်း: တွယ်တာ…ကပ်ညိ မှု သည် ဘဝ ရဲ့ ကံကြမ္မာ ကို ဦးဆောင် တတ်တယ် (၃)
တွယ်တာ…ကပ်ညိ မှု သည် ဘဝ ရဲ့ ကံကြမ္မာ ကို ဦးဆောင် တတ်တယ် (၃)
သာမန်လူတွေ ဖက်တွယ် မက်မော လှတဲ့ ထီးနန်းစည်းစိမ်
ကို *မထီမလေး တံတွေးပေါက် နှယ် စွန့်ပစ်ပယ် ၍*..ဆိုတာ စိတ်ထားဟာ သားကိုချစ်တဲ့ ချစ်ခြင်း ဖြင့်ပင် မဟုတ်ပါလော…..။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ အားကြီး တဲ့ ရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင် အတွက် လိုက်လျော ခြင်း တွေ အဆုံးစွန်…. ထီးနန်း ကို စွန့်လွှတ်……ခဲ့တာတောင်မှ ပဲ..စိတ်ချရတာ မဟုတ်ဘူး..ထီးနန်း ပြန် ယူရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ…မင်းသားလုပ်မဲ့လုပ် အစဖျောက်အောင်သာလုပ်တဲ့..။
မင်းလည်း အဖေကို သတ်….ဘုရင် လုပ်..ငါလည်း ဘုရားကို သတ်..ဘုရား လုပ်မယ် ရယ် လို့ ရှင်ဒေဒတ်ကို ဆရာ တင် မိတဲ့ အဇာတသတ် ဘုရင်ဟာ …ရှင်ဒေဝဒတ် ပြော သမျှ တသဝေ မတိမ်း လုပ်ဆောင်..ဖခင် ကို ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ သည်အထိ မောဟ အမှောင်ဖုံး ခဲ့တာ..အားလုံးသိကြတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ..။
သောတာပန် ဘုရင်ကြီး ဆိုတော့ မေတ္တာဖြင့် ခွင့်လွှတ်ဆဲ……ဈာန်ဝင်စားပြီး စင်္ကြန် ကမ္မဋ္ဌာန်း နဲ့ ရွှင်လန်းနေတယ် ဆိုတော့ အစားအစာ ဖြတ်တောက်တယ်…။ ဝေဒဟီ မိဘုရား တစ်ပါးသာ တွေ့ခွင့်ရတယ် ဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ဆေးကြောသန့် စင် စတုမဓု များ သုတ်လိမ်း ကာ လျှာဖြင့် လျှက် ကာ စားရတယ် ဆိုတဲ့အချိန် မှာ နားလည် သင့်သော အကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်မှု ကင်းလွတ်လျက် ကရုဏာ များစွာ ဖြင့် ကျွန်မ ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းရပါတယ်..။
စင်္ကြန်လျှောက်လို့ ကြည်လင် နေရခြင်း အပေါ် ထပ်ဆင့်ချ တဲ့အပြစ်ဒဏ် ကခြေဖဝါး ဓါး ဖြင့် ခွဲ ၊ ဆားဖြင့်သိပ် မီးကင် ရမယ် ဆိုတဲ့ အပြစ် ဒဏ်…..။
ဒါကိုဆောင်ရွက်ဘို့ ဓါး တွေ သယ်ဆောင်လာ တဲ့ ဆတ္တာ သည် ကို မြင်လိုက်တဲ့အခါ…* အော် ငါ့ သားတော်လေး အမြင် မှန်ရပြီး ငါ့ရဲ့ မုတ်ဆိတ်ကျင်စွယ် တွေ ရိတ်ပယ်…နန်းတော် သို့ ပြန်ခေါ် တော့ မှာမို့ ဆတ္တာသည် လွှတ်တယ် ထင်ပါရဲ့ ** ရယ်လို့ တွေးမိပါသေးသတဲ့…။
အပြစ်မယူစိတ် ….. သံသယ စိတ် မရှိခြင်း ဟာ ဒီအခြေ အနေ ရောက် သည့်တိုင် သင့်နှလုံးသားမှာ ကိန်းအောင်းဆဲပါလား ရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင်..။
အခြေ အနေ ကို အပြည့်အဝ နားလည် သွားသည့်တိုင် နာကျည်းခြင်း ၊ ခံပြင်းခြင်း ၊ ဒေါသထွက် ခြင်း စတဲ့ အာရုံ တွေ မဖြစ်စေတော့ပဲ အော် တာဝန်ရှိသလို လုပ်ကြ ပါတော့ ဆိုပြီး အာရုံ လွှဲခဲ့တယ်..။
ဖြေဖဝါး ဓါးခွဲဒဏ်ရာ ရောဂါ သည်းလာတဲ့အခါ * အဟောဗုဒ္ဓေါ..အဟော ဝမ္မော..အဟော သံဃော..* …ဘုရားရှင်အား ကြည်ညိုလေးမြတ်အားကိုးခြင်း ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ဂုဏ်တော် ကို ရွတ်ဆိုရင်း စုတေစိတ်ကျကာ…ချစ်တတ်လွန်းသူရဲ့ နိဂုံး..ဘဝ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတော့တာ..။
ဘဝ ကူးခဲ့ ချိန် မှာ….. သင်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ သူများ ….ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်က မျှ သင့်အနားမှာ ရှိမနေခဲ့ပါလား..အားကိုးခြင်းတည်ရာ ရှိမနေခဲ့ပါလား ..ရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင်..။
ဒီနေရာ ရောက်တဲ့ အခါ … ကျွန်မမျက်ရည် လည်ရင်း ရွတ်ဆိုနေကျ သံဝေဂ လင်္ကာ ထဲက * တကယ့်အရေး..တကယ့်ဘေး..ဘယ်သွေး ဘယ် သားမကယ် ပြီ * ဆိုတာ ထပ်မံ အတည်ပြု ကာ အားကိုး ရာ တရားရတနာ ကို ပိုလို့ တန်ဘိုးထားလာမိပါတယ်.. ရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင်..။
သင်ဟာ…. သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင် ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဘယ် သူ့ကို မှ အာဏာ မသုံး အတင်းအကြပ်မပြု….
ကိုယ်တိုင်သောတာပန် တည်လို့ တရားရစေချင် လို့ *ခေမာ မိဘုရား* ကို ဘုရားရှင်ထံဖူးတွေ့စေချင်တယ်…တရားရစေချင်တယ်…။ အလှမာန ရှိတဲ့ အချော အလှဆုံးမိဘုရားဆိုတော့ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ ၊ အနတ္တ တရား ၊ အလှအပ ကမမြဲ ဘူးဆိုတဲ့ တရားဟာ အသားနုကို လာထိ သလို ဘယ် ခံနိုင်ပါ့မလဲ..။
ဒီသဘော ကိုလည်း နားလည် တာပဲလားရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင်…။ သင်ဟာ ဒီလို ကိစ္စလေးတောင်မှ အသေးစိတ် စဉ်းစား ပြီး..မင်းမိန့် အာဏာ နဲ့ သွားစေ….မလုပ်ခဲ့။။
ဘုရားရှင် သီတင်သုံးရာ ဝေဠုဝန် ကျောင်းတော်ရဲ့ သာယာ ပုံကို တေးသီချင်းဖွဲ့ ဆို ဖျော်ဖြေ စေကာ သွားချင်အောင် ဥပါယ် တမျဉ် နဲ့ ဆွဲ ဆောင်ကာကုသိုလ် တောသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာ…..
…သင့်ရဲ့ ဦးညွှတ်အပ်တဲ့ယောင်္ကျား ပီသ မှု တစ်ခုပါပဲ ရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင်..။
ဒါဆို … သတ်စေ….ဖမ်းစေ…. ထောင်ချစေ…ရယ် လို့ အမိန့်ချရမဲ့ သောတာပန် ဘုရင် တပါး အတွက် သင်ဘယ်လို များ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါလိမ့်..။
* တိုင်းပြည်ကို အေးချမ်းအောင် ထားပါလို့ တစ်ခွန်း သာ မိန့်သတဲ့…*
သူ့ ဘဝ ကိုကျွန်မ တို့ ပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့် ပြီး သခ်န်းစာယူကြည့်ရအောင်ပါ...။
စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိသူ ဖြစ်တဲ့ သူဟာ…. မင်းသားဘဝ တုံး က သူ့ မှာ မျှော်လင့်ချက် ၅မျိုးရှိခဲ့ပါ တယ်..။အဲဒါတွေကတော့ …
၁။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘုရင်မင်းအဖြစ် ခတ္တိယဘိသိတ်အသွန်းခံချင်တယ် …ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်
၂။ သူ့ တိုင်းပြည်ကို အမှန်တရားကို သိတဲ့ ဘုရား ဆိုတာ တွေကြွလာရင်ကောင်း မှာပဲ ..ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်
၃။ ကြွလာပြီးတော့ ဘုရားကို ဖူးတွေ့ခွင့် ရပါစေ..ဆိုတဲ့ ….မျှော်လင့်ချက်..။
၄။ တရားနာကြား ရပါစေ..။
၅။ တရားသိပါရစေဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ..အဲဒီ ၅ချက်လုံး ပြည့်စုံ ခဲ့ ပါတယ်…။
ရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင်ဟာ သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့အကျင့်သူ့ မှာရှိခဲ့ပါတယ်..။
စိတ်ကောင်းစေတနာ ကောင်းတို့ ပြည်စုံ သူ တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ရကား ဘုရားရှင် ဥရုဝေလတောမှာ ၆နှစ်ပတ်လုံး တရားမကျင့်ခင် ကတည်းက တွေ့ဆုံ ဖြစ်ခဲ့ကတည်းက အလွန် ချစ်ခင်မြတ်နိုး ခဲ့တာမို့ တိုင်းပြည် တစ်ဝက် ထီးနန်း စည်းစိမ် တစ်ဝက် ပေးမယ် လေ အတူ တကွ အုပ်ချုပ်ရအောင်လို့ ကမ်းလှမ်း ခဲ့ပါသေးတယ်…။
လောကီအာရုံ မျ့ားစွန့် ခွာ လျက် တရားကျင့် မည့်သူဖြစ်ကြောင်း သိစေ တော့လည်း ဘုရား ဖြစ်တဲ့ အခါ အရင်ဆုံး သီတင်းသုံး ဘို့ အရင်ဆုံး ပင့်ဖိတ်လျှောက်ထားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်..။
ဘုရားရှင် ဟာ ဘုရား ဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော် လောက် မှာမိဂဒါဝုန် ..နောက် ဂယာ သီသ ကနေ ဥရုဝေလ ကို ပြန်လည် ရောက် ရှိလာခဲ့တယ်..။
*ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ* လို့ သတင်းတွေကလည်း ကြီး လာချိန် ၊ ကမ္ဘာ မှာ ထို ဒေသ မှာ ပြန့်နှံရောကရှိတယ်ဆိုတော့ ..။ ဘုရားရှင် ရာဇဂြိုလ် မြို့ နားက နတ္ထိဝန ထန်းတောဥယျာဉ် မှာသီတင်းသုံးချိန် မို့ သိလျှင်သိချင်း ရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင် ဟာ အခြံ အရံ ၁၂၀၀၀၀ နဲ့ အတူ ဖူးမျှော် ရန် ကြွရောက်လာခဲ့ပါတယ်..။
တကယ် ဆို ရာဇဂြိုလ် မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမထွန်းကားသေးဘူး ။ယဇ် ပူဇော် တာတွေ ဘာတွေရှိတယ်…။ မကောင်းမှုတွေပပျောက် အောင်ရေချိုးရင် ကင်းစင်တယ် ဆိုတဲ့ အယူကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်ပါ..။
ဘုရားရှင် က ကာမဂုဏ် အာရုံ ရဲ့ အပြစ်တွေကို ထောက်ပြခဲ့တယ်..။
ကာမဂုဏ်အာရုံ ကိုလိုလားတောင့်တသူမှန်သမျှ ဟာဆင်းရဲရတယ်..။
လွှတ်ချမှ သာချမ်းသာတယ်...။ ပြီူတော့သစ္စာလေးပါးတရားဟောတဲ့အခါ ရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင် နဲ့ အတူ နောက်လိုက် တစ်သိန်းတစ်သောင်း ဟာ သောတာပန်တည်ခဲ့ပါတယ်..။
တရား ကို သိပါရစေ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လည်း ပြည့်စုံခဲ့တာပေါ့လေ..။
သူပိုင် ဆိုင်တဲ့ ဝေဠုဝန် ဥယျာဉ်တော်ကို အေးချမ်းတဲ့ ကျောင်းတော်ရာအဖြစ် မြတ်စွာ ဘုရားရှင်အား ပထမ ဆုံး စတင်လှူဒါန်းခွင့်ရခဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်.။ ကျောင်းမဆောက်ခင် ဥယျာဉ် အဖြစ်အရင်ဆုံး လှူဒါန်းခွင့်ရရှိခဲ့တာပါ..။
အများ ကအကြံပေး တာတွေလည်းလက်မခံ…. အန္တရာယ် ပေးနိုင်တဲ့ သားကို အနားမှာမထားသင့်..တကယ် ဆို နယ်နှင် ဒဏ် ပေး အဝေးမှာ ထားသင့်ခဲ့တာ..။ အကာအကွယ် လည်းလုပ်မထား သားကို ယုံစားခဲ့ပါတယ်...။
သားကို တွယ် တာ ကပ်ညိ မှု ဟာ သူဟာ လည် စင်းပေးရတဲ့အခြေ အနေ နန်းချလည်းခံရ...ထောင်လည်းကျ နဲ့ ဇာတ်သိမ်း မလှခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ..။
တကယ် ဆို ဒီလောက်ကုသိုလ် တရားနဲ့ ပြည့်စုံခဲ့သူ..။ သောတာပန်လည်းဖြစ်တယ် ဘုရား တရားကိုလည်း ကြည်ညို တယ်…. ။သို့သော်….ဘဝ စုတေချိန်မှာ နိမ့်ကျ တဲ့ နတ် ဘုံ မှာ ဖြစ်ရတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်..။
တကယ် ဆို သူနဲ့ ခေတ်ပြိုင် သောတာပန်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဝိသာခါ ကျောင်းအစ်မ ကြီး တို့ အနာထပိဏ် သူဋ္ဌေး တို့ရှိတယ်..။
ဝိသာခါ ကျောင်းအစ်မ ကြီး က နိမ္မာနရတီိ နတ်ပြည်မှာ ဘဝ ဖြစ်ရတယ်..။
အနာထပိဏ် သူဋ္ဌေးကြီး က တုသိတာ နတ် ဘုံ မှာ ဖြစ်ရတယ်..။
ဘုရားတရားနာ ပြီး သောတာပန်ဖြစ်တာချင်းတူတူ ….သင်သည် အဘယ်ကြောင့် နိမ့်ကျသော ဘဝ တွင် သွား ဖြစ်ရပါသနည်း..။
တွယ် တာမှု သံယောဇဉ် က ဘဝ ကို ဦးဆောင် ခဲ့တယ် ဆိုတာ ကျွန်မ တို့နားလည် ဘို့ ပြဆို ခဲ့ပါပကော… ရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင်..။
တစ်ခါက ..မင်းဧကရာဇ် တစ်ဦးဟာ *ဇနဝဿဘ* ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ စတုမဟာရဇ် နတ်ပြည်က ဝဿဝဏ် နတ်မင်းရဲ့ အခြံအရံ နတ် သား ပါတဲ့လား ……။
အတိတ်ဘဝ… ဘဝ တွေမှာ ဇနဝဿဘ နာမည် နဲ့ နတ်ဘီလူးအကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်…ထို ဘဝကို နိကန္တိ ဆိုတဲ့ တွယ်တာ ကပ်ညိ မှုက ဘဝကံကြမ္မာကို ဦးဆောင်သွားရင်း…ကပ်ညိ တဲ့ ဘဝ ထံ ပြန်သွားရရှာ တာပါကလား ..။
*ယာယံ တဏှာ ပေါဏှော ဘဝိကာ*…တဏှာ ကဘဝကို ရှေ့ဆောင်သွားတတ်တယ် ..။
ကံကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်….. တဏှာ ကဆုံးဖြတ်သွားတယ်..။
အောက်ဆုံး နတ်ပြည်လည်းဖြစ်တယ်..သို့ သော် အဲဒီဘဝ ကို သူကိုယ် တိုင်က နှစ်သက်နေလို့ ပဲ ဆိုတဲ့ *ဘုန်းဘုန်း ဒေါက်တာနန္ဒ မာလာဘိဝံသ* က ဟောကြားဆုံးမ ပါတယ်..။
ဂဟကာရံ ဂဝေသန္တော …… တဏှာ ညွှတ်ရာကို ကံက ဖန်တီးပေး ရတာ..။
သူ့လိုပါပဲ ကျွန်မ မှာလည်း ဟိုလူ့ခင်လိုက် ဒီလူ့မင်လိုက်.....
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါတွယ်တာ မြတ်နိုးတတ်ပါသော ကျွန်မ အဘို့ တွယ်တာကပ်ညိမှု ဆိုတာ သတိထားစရာ သံဝေဂရရှိစေခဲ့ပါတယ်..။
တရားချစ်ခင်ပါလျက် မိမိဘဝ မှာ တွယ်တာ မှုတွေ စွဲလန်းမှုတွေက မိမိဘဝကို သေးသိမ်ပြီးအောက်တန်းကျသွားစေနိုင်တယ် ….. ကြိုးစားဖယ်ရှား သွားရမယ် လို့ သင်္ခန်းစာ ကို ကျွန်မ တို့ ရယူမိပါတယ် ဆိုရင် မေတ္တာကြီး လွန်းသူ ရာဇဂြိုလ် ပြည့်ရှင် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မယ် လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်မိပါရဲ့လေ….။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 1:00 PM